Ny rehetra no mila mandray andraikitra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Vokatry ny toetr’andro
Mpianatra maro no misitraka ny fanabeazana any amin’ny faritra atsimo andrefana, ao Toliara raha ny marimarina tokoa. Noho ny fisian’ny tetikasa izay entina hanatsarana ny fidiran’ny mpianatra an-tsekoly. « Isany mahatonga ny mpianatra tsy hamonjy sekoly ny toetr’andro, tsy misy sakafo ohanina ny ankizy noho ny tsy fahafahana mamboly satria tsy misy orana » : hoy Atoa Etsimifalo lehiben’ny Dren ao Atsimo andrefana raha niresaka tamin’ny mpanao gazety izy ny talata 24 novambra lasa tao amin’ny biraony.
Cantine mampitombo ny tahan’ny mpianatra miditra an-tsekoly
Tena latsaka ambany tokoa ny tahan’ny mpianatra miditra an-tsekoly any amin’ity faritra ity indrindra taorian’ny hamehana ara-pahasalamana. Raha ny firesak’ireo talen-tsekoly sy ireo tompon’andraikitra isan-karazany. Nisy ny ezaka natao niaraka tamin’ny unicef amin’ny fanaovana remise à niveau an’ireo ankizy nitsoaka an-daharana, ireo anefa 25 fotsiny na dia betsaka aza ny ankizy tonga, satria ireo ihany no afaka mahazo fitaovana.
Noana ny ankizy, sahirana ny ray aman-dreny. Tsy mandeha mianatra ny mpianatra fa manampy ny ray aman-dreny amin’ny fitadiavana. Miandry osy... « Tsy tafavoaka mihitsy izahay mpampianatra » hoy ity mpanabe iray tafaresaka taminay. Noana ilay mpianatra ka tsy misy azo atao. Tsy afaka manery an’ireo mpianatra satria noana izy ireo. Inona tokoa moa no azo atao ka izy ary noana. Tsy ny sekoly rehetra no nahazo ity cantine ity. Fa tsapa kosa fa mampitombo ny fidiran’ny ankizy an-tsekoly ny fisian’izany ao an-tsekoly. Ny mpiara-miombon’antoka moa dia manampy ihany fa isika no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanabeazana ny ankizy malagasy. Ny Pam programme alimentaire mondiale moa no miantoka ny cantine amin’ireo sekoly misy cantine. Efa tokony ho eritreretina izay hiantohantsika izany cantine izany raha tiantsika ny hametraka ho tanjona ny fampidirana ny zaza an-tsekoly fa tsy avela ho an’ireo mpiara-miombon’antoka. Tsy any atsimo ihany manko no misy ireo zaza tsy misakafo rehefa hianatra fa dia ao Antananarivo renivohitr’i Madagasikara aza dia ahitana izany ihany koa. Tsy lazaina intsony ny any amin’ny faritra hafa. Efa manerana ny Firenena izy ity raha ny marina fa ny any atsimo aloha izao no tena hita satria any no hitan’ny mpanao gazety amin’izao.
Manimba zavatra ny rafitra tsy mitombona fa miovaova.
Efa nahazo fiofanana avokoa ireo mpampianatra tamin’ny préscolaires sy tamin’ny epp, ny Unicef no mpiara-miombon’antoka tamin’izany. Saingy miteraka olana foana ny tsy fahamarinam-pototra eo amin’ny zavatra atao. Miovaova foana, isaky ny miova ny tompon’andraikitra dia miova ihany koa ny zavatra tiany hatao, hany ka manakorontana ny lamina efa vita, natao talohan’ny nahatongavan’ilay tompon’andraikitra. Nisy ny tetikasa nanofanana ireo ho mpanabe amin’ireny préscolaire ireny, tetikasa niarahana niombon’antoka tamin’ny Depa, sampana miandraikitra ny préscolaire sy ny alphabétisation tao amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena teo aloha sy ny Unicef. Ankehitriny niova ny minisitra dia najanona ihany koa ny tetikasa fa napetraka ho ny Infp no mpanofana, io manko ny sampana miandraikitra ny fanofanana ao amin’ny minisitera. Ireo mpampiofana ao anefa manana ireo ofaniny ao aminy, noho izay tsy dia afaka mandehandeha ry zareo.
Mila programa maharitra sy mitombona ny fanabeazana fa tsy miova isaky ny misolo ny tompon’andraikitra. Izay programa eo dia tokony manaraka ny rehetra. Fa tsy miverina amin’ny voalohany foana.
Efa nofanina ihany koa ireo mpanabe ny amin’ny fampiasana fitaovana entina mampianatra, marobe amin’ireo fitaovana nomen’ny mpiara miombon’antoka toy ny boky, support didactique, nomena matériel ihany koa izy ireo ahafahany mampihatra ireo fanofanana azony. 1844 Epp no hita ao amin’ny Dren Atsimo Andrefana raha ny statistika ny taona 2018-2019 no resahana. Nahazo izay avokoa ireo sekoly rehetra ireo mba hanatsarana sy hisitrahan’ny ankizy ny fanabeazana. Marihina fa ahitana préscolaire avokoa ireo Epp any amin’ity faritra ity. Préscolaire dia manomana ny ankizy hianatra.
Manao ireo vahiny amin’ny fanampiana. Isika angamba tsy hiandry fanampiana lava vao hiasa. Mila miezaka tsikelikely hialana amin’izany raha tena manana ny hambom-po tokoa isika fa tsy hiankin-doha lava eto.